Sofa bed emeputa
Kacha mma na-ere
Furnituredị arịa ụlọ, ntụkwasị obi ịdị mma
Sofa bed, sofa, gbasaa, sofa nkebi, akwa na akwa akwa ya na Modern, Europe, Styledị Chesterfield
N'elu 35 afọ nke ntụkwasị obi ODM & OEM ahụmahụ
Baotian Ngwá ụlọ Co., Ltd..
Baotian Ngwongwo Co., Ltd. tọrọ ntọala na 1985 ma dị na Shunde, Obodo Foshan, Guangdong mpaghara. Anyị na-ekpuchi ebe 50,000 square mita na aha isi obodo banyere 2 nde USD.
Baotian sofa akwa emeputa a na-amụrụ na-amị sofa, akwa sofa, igwe eletrik, matarasị na akwa akwa. Anyị na-ekwenye na oru ngo, N'ogbe, na ndị na-ere ahịa.
Na-eche ihu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arịa ụlọ na-ahụ anya, ekwesiri ilebara otutu echiche anya. N'ezie, maka akwa bed, ụdị ndị ahụ dị ọtụtụ dị ka akwa si nha ruo na ihe. N'ihi ya, ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ ma ọ bụ na ọ na-esiri gị ike ikpebi nke onye kwesịrị ịbụ onye mbụ oke otú, kedu ka esi muta ihe eji edozi akwa a?
U na-eme ka azụ nwee nnukwu ụfụfụ na-eme ka ọ dị nro ma na-akwado ya. Ọchịchịrị isi awọ velvet ákwà ga-adị mfe ọcha. Uwe a na-eji aka ya mee nke ọma kwesịrị dakọtara na tebụl iri nri dị iche iche. Osisi siri ike oche oche nke na-eme ka ndụ ọrụ dịkwuo ogologo na imewe ọnụ.
Styledị bekee nke L nke eji eme akwa akwa ime ụlọ ime ụlọ sofa. Greepu-acha odo odo, ihunanya na mara, zuru okè egwuregwu na ụtọ si akatabi okop a ahịhịa nke mkpụrụ vaịn mmanya. Kemeghi headrests ekwe ka gị ina, wepụ ma ọ bụ jide ha mgbe ọ bụla ị chọrọ. Igwe anaghị agba nchara etiti na pocketed mmiri na oche kwushin weta nchekwa na ụtọ nọdụ mmetụta ọnụ.
Chesterfield sofa nwere chaise bụ anyị dị mfe ma dị nro karịa ndị ọzọ, nke na-ewe na mgbe nile kpochapụwo Chesterfield sofa. Anyị nakweere ụdị ejiji oge ochie mana anyị nyere ya ọgbara ọhụrụ. Dabere na ụdị tufting Chesterfield, anyị na-agbalị ịgbanwe ya omenala arọ udi.
Oge ezumike chaise nke nwere agba odo odo mara mma - ihe omimi di omimi ma di nma. Kwụ osisi siri ike na-eweta nkwado dị ike. Obi iru ala na-ahụ ụzọ ya na oche dị otú a sofa na-eji mmiri mmiri & akwa njupụta.
Na mmezi nke matraasi, matarasị ọhụrụ ngwakọ ọhụrụ pụtara, nke na-eme dịka nhọrọ maka ndị nwere olileanya ịnwe ụfụfụ nchekwa na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ. Nnukwu ngwongwo ngwongwo bụ isi na-enweghị atụ na-ebu ụfụfụ dị elu. Ngwakọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ ịnụ ụtọ ngwakọta nke nkwado mmiri mana na-ekwusi ike na ogo nke ụfụfụ nchekwa.
A na-ahọrọ akwa nchekwa akpụkpọ anụ ojii maka obere ime ụlọ n'ihi na ọ ga-eme ka ọ bawanye ọhụhụ ma gbakwunye ọkụ. Onye ojii a na-ejikọ ọmarịcha na ụdị na isi mkpuchi isi siri ike yana nke zuru oke nke na-ezobe igbe nchekwa.
Chesterfield Design Black Fabric Corner Couch, Oge a, Dị ọcha, na Ejiji. Otu nnukwu iberibe n'akpa uwe eriri igwe fom dị ezigbo mma ma dịkwa nro. Ibughari imewe dị mfe ọcha na idozi. Mkpọchi ọla edo na ụkwụ igwe anaghị agba nchara na-eme ka ihe sofa ahụ maa mma.
3 oche ndina sofa bed, na Belgium Brand Mechanism Bed Frame. Ike gburugburu piping metal etiti, na akwa mmiri matarasị: 143*195*12cm. Otu nzọụkwụ imeghe sofa bed dịkwuo mfe ma dị mfe ijikwa.
Furniturelọ oriri na ọ modernụ Hotelụ nke oge a na-eji ihe eji eme akwa ihe ndina 500 Ahịa ndị America. Ngwunye usoro piping Square na-enye nkwado siri ike iji gboo mkpa nke ụlọ nkwari akụ na ezinụlọ dị iche iche. Standard n'akpa uwe spring matarasị size: 90/130*185*12cm.
Contemporary Nkuku Sofa
Ihe sofa akụkụ sofa na-ewu ewu ugbu a n'ihi nha ha nwere mgbanwe yana akụkụ nkasi obi ha na-etinye. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe na-adaba adaba n'etiti chaise na sofa akụkụ, tụlee arịa Baotian anyị. Solọ sofa a sara mbara nwere ohere zuru ezu maka ezinụlọ niile na-enweghị iwu karịrị akarị. Grey akwa upholstery na-agbakwunye mgbakwunye mmetụ nke okomoko na imewe. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị ka velvet ma ọ bụrụ na ị na-enweghị mmasị na-akpa ákwà ka nwere ụlọ ahịa gburugburu ...
Navy Blue Nkuku Sofa
Abia na sofa, a ga - ahọrọ nhọrọ na - adịghị agwụ agwụ na uche gị dabere na nha ha, ịke, ihe onwunwe, nka, na ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ ụdị karịa ka ị nwere ike iche n'echiche ihu ọtụtụ ụdị. Otú ọ dị, Ihe atọ dị mkpa na-ekpebi ụdị sofa. Ndị a gụnyere ogwe aka, azu, na ụkwụ sofa, n'agbanyeghị ma ọ bụ a navy-acha anụnụ anụnụ na nkuku sofa. E wezụga azụ, ogwe aka, sket, oche, wdg, a na-enye nkọwa ndị ọzọ ka anyị tụlee banyere sofa mmiri na-acha anụnụ anụnụ velvet ....